Global Voices teny Malagasy · 8 Marsa 2012
08 Marsa 2012
Tantara tamin'ny 08 Marsa 2012
Eoropa Afovoany & Atsinanana08 Marsa 2012
Azia Atsinanana08 Marsa 2012
Ireo mpanao gazetin'ny iray amin'ireo tambajotram-pahitalavitra ara-barotra lehibe indrindra any Korea Atsimo, ny Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) dia mitokona mandritra ny fotoana tsy voafaritra efa nanomboka tamin'ny volana Janoary 2012, mitaky ny fahamarinana amin'ny fanaovan-gazety tsy misy ambadika politika. Tamin'ny 4 Martsa 2012, mpanao gazety 166 no nanambara fa hiala...
Venezoelà: “Manapika Fakantsary Fa Tsy Manapoaka Basy”
Amin'ny fampiasana ny tarigetra hoe "Manapika Fakantsary Fa Tsy Manapoaka Basy" i Alberto no te-hampiseho ny lafiny maha-te-ho-tia ny tanàna zary efa malaza ratsy.
Meksika08 Marsa 2012
Nametraka lalàna fanaraha-maso ankehitriny ny mpanao lalàna Meksikana , izay nanome fahafahana maimaim-poana tsy ilàna didy avy amin'ny fitsarana ny mpitandro filaminana hiditra amin'ny fanarahana ny misy ny olona iray ara-jeografika. Saika ny maro mihitsy ny nanaiky tanteraka io volavolan-dalàna io tamin'ny vato mpomba 315, mpanohitra 6 , ary tsy...
Azia Atsimo08 Marsa 2012
Mikorosofahana ny toekaren'i Sri Lanka ankehitriny, miakatra ny vidim-piainana sy ny hetra ka miteraka hetsi-panoherana marobe izany. Nandray fepetra feno herisetra ny polisy sy ny tafika hamoretana ireo mpanao fihetsiketsehana, ka marobe ireo namoy ny ainy tao anatin'izay volana maromaro lasa izay. Ratmale tao amin'ny bilaogy Serendipity nanazava hoe : Ao anatin'ny fotoan-tsarotra...
Espaina: Mbola Mitohy Hatrany Ny Fanenjehana Ny Mpianatra Ao Valencia
Eoropa Andrefana08 Marsa 2012
Andro vitsy monja taorian'ny fanenjehana mahery vaika ireo mpianatra tao amin'ny ambaratonga faharoa tao amin'ny sekoly Luis Vives tao Valencia izany nataon'ny mpitandro ny filaminana, dia mbola lasibatry ny daroka ihany ny mpianatra, natositosika ary niharan'ny herisetra avy amin'ny mpitandro ny filaminana tao anatin'ny hetsi-panoherana am-pilaminana nataon'izy ireo